Writing Week (6) - Smart OET Training Centre
Writing Week (6)
Week6– Day 1 Plan
Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Transfer Letter Sample Letters (11) Letter Writing Exercise (12) ➡ Day 1 တွင် Transfer Letter ရေးနည်းကို လေ့လာရပါမည် ➡ Transfer Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ လေ့ကျင့်ရပါမည်
Sample Letter (11)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (11) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (11) Explanation 🔸Duration = 15 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ Transfer Letter ရေးနည်းကို လေ့လာရပါမည် Transfer Letter 🔸Duration = 20 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 ဓါတ်ပုံရိုက်လျှင် စာရွက်တစ်ရွက်လုံးကို ... Read more Letter (12)
Week6– Day 1 Summary
Congratulation! You have completed Day 1 Lessons. Summary of Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Transfer Letter Sample Letters (11) Letter Writing Exercise (12) ➡ Transfer Letter ရေးနည်းကို လေ့လာခဲ့ပြီး Transfer Letter ၁စောင်ကိုလဲ လေ့ကျင့်ရသောကြောင့် Transfer Letter အကြောင်းကို သိနိုင်ပါသည် ➡ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာပြီးလျှင် Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်
Week6– Day2Plan
Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Common Errors Sample Letters (12) Letter Writing Exercise (13) ➡ Day2တွင် Letter ရေးရာတွင် တွေ့ရများသော Common Errors များကို လေ့လာရပါမည် ➡ Letter အသစ် ၁စောင်ကိုလဲ လေ့ကျင့်ရပါမည်
Sample Letter (12)
🔸 Video ထဲတွင် Letter (12) ကို ရေးထားသော Sample answer ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter (12) Explanation 🔸Duration = 24 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
➡ Letter ရေးရာတွင် တွေ့ရများသော Common Errors များကို လေ့လာရပါမည် Common Errors 🔸Duration = 23 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ်
🔸 ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် Letter တစ်စောင်ကို အစအဆုံး ရေးရပါမည် 🔸 ပေးထားသော Case Notes ကို ဖတ်ပြီး Letter ကို ရေးပါ 🔸 Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Letter ကို အစ အဆုံး ရေးပြီး မိမိအဆင်ပြေသည့်နည်းနှင့် Upload လုပ်ပေးပါ 🔸 Computer Microsoft Word file နှင့် တင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် 🔸 လက်ရေးနှင့် ရေးထားသော Letter များကိုလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်နိုင်ပါသည် 🔸 သို့သော် လက်ရေးပီသမှုတော့ ရှိဖို့လိုပါသည်။ လက်ရေးနှင့်ရေးလျှင် တစ်ကြောင်းခြားလောက်ရေး ပေးပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည် 🔸 ဓါတ်ပုံရိုက်လျှင် စာရွက်တစ်ရွက်လုံးကို ... Read more Letter (13)
Week6– Day2Summary
Congratulation! You have completed Day2Lessons. Summary of Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာခဲ့သော သင်ခန်းစာများမှာ Common Errors Sample Letters (12) Letter Writing Exercise (13) ➡ Day2တွင် Letter ရေးရာတွင် တွေ့ရများသော Common Errors များကို လေ့လာခဲ့ရသောကြောင့် ကိုယ်တိုင်ရေးရာတွင်လဲ သတိထားသင့်ပါသည် ➡ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာပြီးလျှင် Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်
Sample Letter (May Hong)
🔸 Video ထဲတွင် Sample Letter ကို ရှင်းပြပေးထားပါသည် 🔸 ပေးထားသော Sample letter ကိုဖတ်ပြီးမှ Explanation Video ကို ကြည့်ပေးပါ 🔸 Sample Letter pdf file ကိုလဲ download လုပ်ထားနိုင်ပါသည် DOWNLOAD Sample Letter Explanation 🔸Duration = 11 minutes 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို မြှင့်လို့ ရပါတယ် 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
ဤ Video တွင် ➡ Letter ရေးနည်း၏ အနှစ်ချုပ် Round-up ➡ Writing Scores အမှတ် သတ်မှတ်ချက်များ ➡ အမှတ် 350 & Above ရအောင် ယူနည်းများကို ပြောပေးထားပါသည် Writing Round-Up 🔸Duration = 27 minutes 🔸 Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
Congratulations! 🔸 OET Writing Online သင်တန်းကို ပြီးဆုံးသည်အထိ အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့လို့ ဂုဏ်ယူပါတယ် 🔸 သင်တန်းပြီးသွားပေမဲ့ ဒီ Online Course ကို (၃)လအထိ Access ဖွင့်ပေးထားလို့ ပြန်ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ ရပါတယ် 🔸 ကိုယ် စာမေးပွဲဖြေမယ့် လမှာလဲ ဒီ Course ကို (၁)လတိတိ ပြန်ကြည့်ခွင့် ရမှာမို့ Exam Date သေချာရင် သင်တန်း Page ကို လာပြောထားလို့ ရပါတယ် 🔸 OET Exam နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကူအညီတွေ၊ စာမေးချင်တာတွေ ရှိရင်လဲ 🔸 သင်တန်း Phone = 0995 8338 416 🔸 ... Read more Congratulations